umbuzo Aircraft amaxwebhu
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #255 by Dariussssss
Ndingathanda ukukubuza, ndiyathemba umntu uyazi ukuba ...
Zonke olungagqibekanga, kwaye iinqwelo-moya ezininzi payware kuba kakhulu amaxwebhu, ezifana uluhlu ngetshekhi, isantya reference njalo njalo. Ndizama iinyanga ukufumana ezi kuba uTomas Ruth A330 / 340, kunye nezinye iinqwelo ezininzi, kodwa ayikho. Ngoko ke, ngaba nabani ukwazi ukufumana oko kuyo?
Ndibulela kakhulu kwangaphambili.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago - iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #256 by Gh0stRider203
Kulungile, ndidla ukusebenzisa Wikipedia for cruise isantya / ephakame.
Ndiyathemba oku kuyanceda kuba abanye ..
Unokutshekisha oko utsho FSX kuba kukudla max / uwonke-ubunzima nxamnye Wikipedia, njengoko yintoni apho ithande ukuba oluchanileyo. UKUBA FSX alufani lo nto sisombululo kulula kakhulu
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-1 inyanga edlulileyo Gh0stRider203.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #257 by Dariussssss
Ingxaki engundoqo kunye intlungu ..... le, xa zibhabha, xa sisondela vne, okanye isantya wesitali, le tape IAS ufumana ezibomvu. Kungekhona TR A330 / 340. Ngenxa yoko, ndiya kuba nofifi apho isantya ukuziziliza nto inje, i nakutsho kuphela. Lokutshekisha ngayo ukuzeyisa, akunikayo ukuba ulwazi, akukho namnye ndiyifumene.
Ndakwazi ukwemba phandle i amaxwebhu CLS A340 ... kodwa mna nzulu kwamathandabuzo ukuba oko kufana kunye TR A340.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago - iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #258 by Gh0stRider203
kakuhle ngokunyaniseka ... ndiye oko ndiya kubuya ndiyifune ngokuba intaka lenene .....
obabuphilwa 747 (akukho umcimbi omnye) Mna, bakholisa ukwenza 245 ngezantsi 10K on ukuqabela-phandle, zibekele autothrottle kukufunayo isantya cruise na IAS, indlela yokugqibela ndiya bakholisa ukuba ndiyenzele 135 IAS
isantya asesitalini enyanisweni lula ukufumana phandle! ukuba i fayile aircraft.cfg
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #259 by Dariussssss
Akuyifumana .... kodwa akukho ndlela oku ichanekile.
iiflephu ezipheleleyo zankomo kts isantya-120 ukuba Airbus a340-500?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #260 by Gh0stRider203
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #261 by Gh0stRider203
oko ishothi IXESHA kodwa uyazi ukuba yintoni ... ZAMA ukufumana wambamba Airbus ... ukubona ukuba baza kukunceda phandle!
iminyaka 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #306 by Dariussssss
Emva uphendlo ehlabathini Wena Tube, ndakwazi ukufumanisa into ethile ..
A340-600, isantya indlela 160-170 kts, nesantya zevenkile ukuba kts nje ngezantsi 160, leyo woow enye enkulu .... Akumangalisi ke, kwakunzima onjalo umhlaba lo nto. A340s ezincinci ... guess wam osenyongweni, 5-10 kts yesantya esingaphantsi, kodwa kakhulu ngokukhawuleza.
Ngaba umntu abe nolwazi nangakumbi ngalo?
iminyaka 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #308 by Colonelwing
Inkcazelo: A340-500,600 Imida ukusuka FCOM
iminyaka 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #312 by Dariussssss
Maz indoda eninzi. Andikwazanga ukufumana nto kuloo ndawo, akukho ndlela endizakuzihamba ukuyihlawulela. Kodwa, ndiye ndakwazi wawumba phandle kwenye indawo. Kunjalo, enye enkulu, enkosi kakhulu. Ndibe bendingayazi yeli xwebhu konke konke.
Ixesha ukwenza page: 0.540 imizuzwana